Indlela Yokunquma Ngomshini Wokunambitheka Okufanele | I-HVC Capacitor-High Voltage Ceramic Capacitor I-Doorknob Capacitor i-High Voltage Multi Layer Cap Capitor
Kuyisipho somshado esiphelele, isipho esidumile sokuvula i-akhawunti entsha yasebhange ngisho nenkanyezi ye-movie yayo egqwayizayo. I-toaster yakho encane enesibindi kufanele ibe nezinto zokusebenza zasekhishini.
Ekuboneni kokuqala, kuyidivayisi elula. Ishisa isinkwa bese siyaphuma. Kepha, ikwenza kanjani nje lokho? Zisebenza kanjani izilungiselelo ezahlukahlukene? Futhi ikwazi kanjani ukufaka i-toast lapho isiqedile?
I-toaster eyisisekelo ingalandwa kunoma yisiphi isitolo sesaphulelo sezinkulungwane ezingamashumi amabili. Iningi linezilungiselelo zokukuvumela ukunquma ukuthi ufuna ubhontshisi wakho ubumnyama buni. Iningi lizogcoba izingcezu ezimbili zesinkwa. Usebenzisa imisebe ye-infrared, i-toaster izoshisa isinkwa sakho. Uzobona amakhoyili aphenduke abomvu futhi ashise, leyo yimisebe ye-infrared eshisa kancane futhi yomise ubuso besinkwa.
I-toasters evame kakhulu isebenzisa i-nicrome wire ehlanganiswe emuva nangaphezulu ngapha kwekhadi le-mica ukuze idale imisebe ye-infrared. I-alloy ye-nickel ne-chromium, ucingo lwe-nichrome lunomshini omkhulu wokugesi kagesi futhi aluxhasi uma uphuthumayo. I-toaster elula izoba namakhamera amabili we-mica ehlanganiswe ngecingo le-nichrome ehlukanisiwe ukwenza ifomu elibanzi ngamasentimitha ububanzi. Ungathola amamodeli ngokuvuleka okubanzi ukuze uthole izinto ezinambitheka njengama-bagels. Izintambo zivele zixhuma ipulaki.
Kunezinhlobo ezintathu eziyisisekelo zama-toasters. Owokuqala yibhukwana. Ngomqondo oyisisekelo kakhulu ungafaka i-toaster yemanuwali, ushise isinkwa, ukhiphe i-toaster bese uyiphendula ukuze ukhiphe isinkwa. Iningi labantu alinalo lolo hlobo lwesineke futhi alifuni ukubhekana nokugcwala okungenakugwenywa kwezimvuthu zesinkwa ezizophuma kanye nesinkwa. Amanye ama-toaster wezandla aqondile futhi isinkwa simane sibekwe ku-rack eyisicaba ophendulela ngesandla ukwenza i-toast kolunye uhlangothi. Kwi-toaster yezandla, wahlulela ukuthi isinkwa sesenziwe nini. Lokho kusho ukuthi kufanele uyibuke ukugwema isinkwa esishisiwe.
I-Toasters Enemi-Automatic inezici ezinjengebell ukukutshela ukuthi isilonda sesilungele. Lesi simodeli singase sikutshele lapho isinkwa siphelile, kodwa ngeke sihlanganise isici se-pop-up. Kodwa izinambuzane eziningi ezizenzekelayo zinejubane lokulawula ukuze ukwazi ukulungisa ukulungiselelwa kuya kufinyelela kobumnyama obufunayo.
Kunezinhlobo eziningi zama-toasters okuzenzakalelayo, kepha iningi linezici ezifanayo eziyisisekelo. Njenge-manual kanye ne-semi-othomathikhi amandla kagesi kwi-heater enza i-toast yesinkwa. Kepha lezi zinhlobo ngokuvamile zifaka ezinye izici ezimbili. Itreyi elilayishwa entwasahlobo liqhuma ubhontshisi lapho usuqedile. I-timer ngasikhathi sinye icisha i-toaster bese idedela ugqoko.
Izinto eziyisisekelo eziyisisekelo kufanele zenzeke ukuze uthole u-toast. Umshini udinga ukubamba inhlawulo phansi futhi ngaphakathi kwe-toaster isikhathi esithile kuze kube yilapho ishisa kahle. Amandla kufanele afike ezintambo ze-nichrome. Futhi i-timer kufanele ikhulule indlela ephethe isilonda sakho.
Ku-toaster eyisisekelo, lo mshini usebenza kanje: Uma ushaya phansi isibambo, ibha yepulasitiki icindezela oxhumana nabo namandla asetshenziswa ebhodini lesifunda. Amandla we-120-volt agijima ngokuqondile oxhumana nabo kuya ezintambo ze-nichrome, ukudubula imisebe ye-infrared ukuze kugcobe isinkwa. I-electromagnet ithola amandla kusuka kusijikelezi sezinto ezihamba phambili, izimpikiswano nama-capacitors ukubamba isinkwa ukuheha insimbi bese ubamba isinkwa ku-toaster. Isifunda futhi sisebenza njenge-timer. Uma i-voltage ethile ifinyelela ku-capacitor ithola amandla ku-electromagnet. Intwasahlobo iphakamisa ucezu noma izingcezu zesinkwa.
Ukudla kwasekuseni kukhishwa.
U-Lawrence Reaves ubhala u-Hamilton Beach, inkampani yokusebenza ekhishini ekhethiwe kakhulu kwe-toasters neminye imikhiqizo kubandakanya abapheki abancane nabahlanganisi. Ukuze uthole ukwaziswa okungaphezulu nganoma iyiphi yale mikhiqizo vakashela leli sayithi lapha.
ciroceanint@gmail.com Voltage High resistors Nquma, Right, into yokucocobalisa